यूहन्ना १६ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
१६ “तिमीहरूले ठेस नखाओस् भनेर मैले यी कुराहरू भनेको हुँ। २ मानिसहरूले तिमीहरूलाई सभाघरबाट बहिष्कार गर्नेछन्‌। भन्ने हो भने, यस्तो समय आउँदैछ, जब तिमीहरूलाई मार्नेजति हरेकले परमेश्वरलाई पवित्र सेवा चढाइरहेको छु भन्ठान्नेछ। ३ तिनीहरूले न बुबालाई न त मलाई नै चिनेका छन्‌; त्यसैले तिनीहरूले त्यसो गर्नेछन्‌। ४ यद्यपि, यी कुराहरू मैले तिमीहरूलाई भनिदिएको छु, ताकि जब यी कुराहरू हुने समय आउँछ, तब मैले तिमीहरूलाई त्यसबारे बताएको थिएँ भनी तिमीहरूले सम्झन सक। “यी कुराहरू मैले तिमीहरूलाई पहिल्यै बताइनँ, किनकि म तिमीहरूसितै थिएँ। ५ तर म अब भने मलाई पठाउनुहुनेकहाँ जाँदैछु, तैपनि तिमीहरूमध्ये कसैले पनि मलाई ‘तपाईं कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ?’ भनेर सोध्दैनौ। ६ तर मैले तिमीहरूलाई यी कुराहरू भनेकोले तिमीहरूको मन दुःखले भरिएको छ। ७ यद्यपि, म तिमीहरूलाई साँचो कुरा भन्दैछु, तिमीहरूकै फाइदाको लागि म जाँदैछु। किनभने म गइनँ भने कुनै हालतमा मदतगार तिमीहरूकहाँ आउनेछैन तर यदि म गएँ भने म त्यसलाई तिमीहरूकहाँ पठाउनेछु। ८ अनि जब त्यो मदतगार आउनेछ, तब त्यसले पापको विषयमा, परमेश्वरको स्तरबमोजिमको असल कामको विषयमा र न्यायको विषयमा संसारलाई चित्तबुझ्दो प्रमाण दिनेछ: ९ सबैभन्दा पहिला पापको विषयमा, किनकि तिनीहरू ममाथि विश्वास गर्दैनन्‌; १० त्यसपछि परमेश्वरको स्तरबमोजिमको असल कामको विषयमा, किनकि म बुबाकहाँ जाँदैछु र अबउसो तिमीहरूले मलाई देख्नेछैनौ; ११ अनि न्यायको विषयमा, किनकि यस संसारको शासकको न्याय भएको छ। १२ “मैले तिमीहरूलाई भन्नुपर्ने कुराहरू धैरै छन्‌ तर अहिले तिमीहरू ती बुझ्न सक्दैनौ। १३ तथापि, जब त्यो अर्थात्‌ सत्य प्रकट गर्ने पवित्र शक्ति आउँछ, तब सत्य राम्ररी बुझ्न मदत गरेर त्यसले तिमीहरूलाई डोऱ्याउनेछ, किनकि त्यसले आफूखुसी बोल्नेछैन तर जे सुन्छ, त्यही बोल्नेछ र आउँदै गरेका कुराहरूबारे तिमीहरूलाई बताउनेछ। १४ त्यसले मेरो महिमा गर्नेछ, किनकि त्यसले मबाट ग्रहण गरेका कुराहरू तिमीहरूलाई बताउनेछ। १५ बुबासित भएका सबै कुरा मेरै हुन्‌। त्यसैले त मैले भनें नि, त्यसले मबाट ग्रहण गरेका कुराहरू तिमीहरूलाई बताउनेछ। १६ अब अलिक बेरपछि तिमीहरूले मलाई देख्नेछैनौ अनि फेरि त्यसको अलिक बेरपछि तिमीहरूले मलाई देख्नेछौ।” १७ त्यसकारण उहाँका चेलाहरूमध्ये केहीले आपसमा यसो भने: “ ‘अलिक बेरपछि तिमीहरूले मलाई देख्नेछैनौ अनि फेरि त्यसको अलिक बेरपछि तिमीहरूले मलाई देख्नेछौ, किनकि म बुबाकहाँ जाँदैछु’ भनेर उहाँले हामीलाई के भन्न खोज्नुभएको होला?” १८ त्यसैले तिनीहरू यसो भन्दै थिए: “ ‘अलिक बेरपछि’ भनेर उहाँले के भन्न खोज्नुभएको होला? उहाँले के कुरा गर्नुभएको हो, हामीलाई थाह छैन।” १९ तिनीहरू उहाँलाई सोध्न खोज्दैछन्‌ भन्ने थाह पाएर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “अलिक बेरपछि तिमीहरूले मलाई देख्नेछैनौ अनि फेरि त्यसको अलिक बेरपछि तिमीहरूले मलाई देख्नेछौ भनेर मैले के भन्न खोजेको होला भनी के तिमीहरू आपसमा छलफल गर्दैछौ? २० तिमीहरूलाई म साँच्चै भन्छु, तिमीहरू रुनेछौ र विलाप गर्नेछौ तर संसारले आनन्द मनाउनेछ; तिमीहरू शोकाकुल हुनेछौ तर तिमीहरूको शोक हर्षमा परिवर्तन हुनेछ। २१ बालक जन्माउने बेला स्त्रीलाई पीडा हुन्छ, किनकि उसको बेला आइपुगेको छ तर जब उसले बालक जन्माउँछे, तब संसारमा एउटा बालकको जन्म भएको खुसियालीमा उसलाई त्यो वेदनाको सम्झना रहँदैन। २२ त्यसैगरि तिमीहरूलाई पनि अहिले पक्कै पीडा भइरहेको छ तर जब म तिमीहरूलाई फेरि भेट्नेछु, तब तिमीहरूको मन आनन्दित हुनेछ अनि तिमीहरूको खुसी कसैले पनि खोस्न सक्नेछैन। २३ त्यो दिन तिमीहरूले मलाई कुनै प्रश्न सोध्नेछैनौ। तिमीहरूलाई म साँच्चै भन्छु, तिमीहरूले बुबासित केही माग्यौ भने मेरो नाममा उहाँले त्यो तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ। २४ अहिलेसम्म तिमीहरूले मेरो नाममा एउटै कुरा पनि मागेका छैनौ। माग अनि तिमीहरूले पाउनेछौ; यसरी तिमीहरूको आनन्द पूर्ण होस्। २५ “मैले तिमीहरूलाई यी कुराहरू दृष्टान्तको रूपमा बताएको छु। यस्तो बेला आउँदैछ, जब म तिमीहरूसित दृष्टान्त चलाएर कुरा गर्नेछैन तर बुबाको विषयमा तिमीहरूलाई प्रस्टसित बताउनेछु। २६ त्यो दिन तिमीहरूले मेरो नाममा माग्नेछौ तर तिमीहरूले बिन्ती गर्दा हरेक चोटि मैले बुबालाई बिन्ती गर्नेछु भनेर चाहिं भन्न खोजेको होइन। २७ बुबा आफैले तिमीहरूलाई माया गर्नुहुन्छ, किनकि तिमीहरूले मलाई माया गरेका छौ अनि म बुबाको प्रतिनिधि भएर आएको हुँ भनेर विश्वास गरेका छौ। २८ म बुबाको तर्फबाट यस संसारमा आएको हुँ। अनि म यो संसार छोडेर बुबाकहाँ जाँदैछु।” २९ उहाँका चेलाहरूले भने: “हेर्नुहोस्, अब भने तपाईं प्रस्टसित बताउँदै हुनुहुन्छ अनि दृष्टान्त पनि चलाउनुभएको छैन। ३० अब हामीलाई थाह भयो, तपाईंलाई सबै कुरा थाह छ अनि कसैले पनि तपाईंलाई प्रश्न गर्नु आवश्यक छैन। तपाईं परमेश्वरको तर्फबाट आउनुभएको हो भनेर यसैबाट हामीलाई विश्वास भयो।” ३१ येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “के तिमीहरू अहिले विश्वास गर्छौ? ३२ हेर, यस्तो समय आउँदैछ अनि भन्ने हो भने, त्यो समय आइसकेको छ, जब तिमीहरू सबै तितरबितर भएर आ-आफ्नो घर जानेछौ र मलाई एक्लै छोड्नेछौ; तैपनि म एक्लो छैन, किनकि बुबा मसित हुनुहुन्छ। ३३ मद्वारा तिमीहरूलाई शान्ति मिलोस् भनेर मैले तिमीहरूलाई यी कुराहरू भनेको हुँ। संसारमा तिमीहरूले सङ्कष्ट झेलिरहेका छौ तर साहसी होओ! मैले यस संसारलाई जितेको छु।”